Aluminium corrugated core composite board inofanirwa kuve nekwanisi yekuchengetedza zviwanikwa uye kudzikisa mutengo
Aluminium corrugated core composite board inofanirwa kuve nekwanisi yekuchengetedza zviwanikwa uye kudzikisa mutengo. Kazhinji, mbiri yekumhanyisa uye imwe yekuomesa (maviri kupfeka uye maviri kuomesa) kana matambudziko ehunhu, senge chakakomba chakasununguka pamupendero, yakasununguka nzvimbo iri pakati, kushayikwa kupfeka, hombe se ...
Ruzivo kuunganidzwa kwealuminium epurasitiki rinoumbwa bhodhi
Aluminium epurasitiki pani (inozivikanwawo sealuminium epurasitiki rinoumbwa bhodhi) rinoumbwa nemhando dzakasiyana-siyana. Iwo ekumusoro uye ezasi akaturikidzana akakwira-akachena aluminium alloy mahwendefa, uye iyo yepakati isiri-chepfu yakaderera-density polyethylene (PE) yepakati bhodhi. Firimu rinodzivirira rakanamirwa kumberi. Zvekunze ...
Pfupi sumo yealuminium epurasitiki ndiro
Aluminium epurasitiki ndiro ndiro chidimbu chealuminium epurasitiki yakasanganiswa ndiro. Chigadzirwa icho chidimbu-chetatu chakasanganiswa ndiro ine purasitiki seyakadzika dura uye aluminium zvinhu pamativi ese. Kushongedza uye kwekudzivirira kupfeka kana mafirimu akafukidzwa pamusoro peichi chigadzirwa seyekushongedza surfa ...